A' Design Awards vakahwina vanoziviswa
Mubairo wepasi rose weA'Design Award wakazivisa dhizaini dzakanakisa dzegore mune ese madhizaini ekuranga.
A' Dhizaini Mubairo (http://www.designaward.com), mibairo yedhizaini yepasi rose inotonga World Design Rankings, yakazivisa mhedzisiro yemakwikwi edhizaini ekupedzisira.
A' Dhizaini Mubairo yakazivisa zviuru zvezvigadziriso zvakanaka, zvigadzirwa zvakanyatsogadzirwa, uye mapurojekiti anokurudzira sevakundi. Zvichangobva kuziviswa dhizaini-kuhwina mibairo inoburitswa pamhepo paA' Design Mubairo wekuhwina runyorwa.
Mapindiro eA' Design Award akanyatsoongororwa neboka revatongi vane simba pasi rose rakaunza pamwechete vadzidzi vane mukurumbira, vatori venhau vane simba, nyanzvi dzekugadzira uye mabhizinesi ane ruzivo kubva pasirese.
A' Dhizaini Mubairo jury yakapa kutarisisa kukuru kune mharidzo uye ruzivo rwechirongwa chega chega. Kufarira kumubairo wedhizaini kwaive pasi rese, paine mazita kubva kumaindasitiri makuru makuru, uye mapindiro kubva kunhamba yakakosha yenyika.
Vanofarira dhizaini yakanaka uye vatori venhau pasi rese vanokokwa neushamwari kuti vawane kurudziro nyowani yedhizaini uye kuwana mafambiro azvino muhunyanzvi, zvivakwa, dhizaini uye tekinoroji nekushanyira A 'Design Mubairo wekuratidzira. Vatori venhau uye vanofarira dhizaini vachanakidzwawo nekubvunzurudzwa kunoitwa nevagadziri vanohwina mibairo.
A' Dhizaini Makwikwi mhedzisiro inoziviswa gore rega rega pakati paApril, kutanga kune vanohwina-mubairo. Kuziviswa kwezvibodzwa zveveruzhinji kunouya gare gare pakati paChivabvu.
Zvigadzirwa zvakanakisa, mapurojekiti uye masevhisi pasi rese anoratidza dhizaini yepamusoro, tekinoroji uye hunyanzvi zvinopihwa mubairo weA' Design. A' Dhizaini Mubairo unomiririra kugona mukugadzira uye hunyanzvi.
Kune mashanu akasiyana mazinga edhizaini mibairo yekusiyanisa:
Platinamu: Iyo Platinum A' Dhizaini Mubairo zita rinopihwa kune akanakisa akanakisa epasi-yepasi madhizaini anoratidza hukuru hwepamusoro dhizaini.
Ndarama: Iyo Goridhe A' Dhizaini Mubairo zita rinopihwa kune akanyanya kunaka-yepasi madhizaini anoratidza epamusoro-soro dhizaini hunhu.
Sirivha: Iyo Sirivha A' Dhizaini Mubairo zita rinopihwa kune akanakisa epasi-yepasi madhizaini anoratidza hukuru hwepamusoro mukugadzira.
Bronze: Iyo Bronze A' Dhizaini Mubairo zita rakapihwa kune yakanaka kwazvo madhizaini anoratidza kugona mukugadzira.
Simbi: Iyo Iron A' Dhizaini Mubairo zita rinopihwa kune yakanaka magadzirirwo anoratidza kugona mukugadzira.
Vagadziri, maartist, vagadziri vezvivakwa, masitudiyo edhizaini, mahofisi ezvivakwa, masangano ekugadzira, mhando, makambani nemasangano anobva kunyika dzese anodanwa gore negore kuti atore chikamu mukukudzwa nekudoma mabasa avo epamusoro, mapurojekiti uye zvigadzirwa kuti zvitariswe.
Iyo A' Dhizaini Mibairo inopihwa mumhando dzakasiyana siyana dzemakwikwi, ayo anowedzera aine akawanda madiki.
Iwo A' Dhizaini Mubairo mapoka anogona kuunganidzwa mumashanu makuru:
Mubairo weYakanaka Spatial Dhizaini: Spatial dhizaini mubairo chikamu chinocherekedza dhizaini yakanaka mukuvaka, dhizaini yemukati, dhizaini yemadhorobha uye dhizaini yemamiriro.
Mubairo Wekugadzira Maindasitiri Akanaka: Dhizaini yedhizaini yemubairo chikamu inocherekedza dhizaini yakanaka mukugadzirwa kwechigadzirwa, dhizaini yefenicha, dhizaini yemwenje, dhizaini yemudziyo, dhizaini yemotokari, dhizaini yekurongedza uye dhizaini yemuchina.
Mubairo weKukurukurirana Kwakanaka Dhizaini: Kukurukurirana dhizaini mubairo weboka inocherekedza dhizaini yakanaka mudhizaini dhizaini, dhizaini yekudyidzana, dhizaini yemutambo, dhizaini yedhijitari, mufananidzo, videography, kushambadzira uye dhizaini yekushambadzira.
Mubairo weKugadzira Mafashoni Mafashoni
Mubairo weYakanaka Sisitimu Dhizaini: Sisitimu yedhizaini yemubairo chikamu inocherekedza dhizaini yakanaka mudhizaini yebasa, dhizaini dhizaini, dhizaini yedhizaini, bhizinesi modhi dhizaini, mhando uye hunyanzvi.
Vanokodzera vanohwina mubairo vanokokwa kuti vauye kumutambo wegala usiku uye mubairo muItaly, kwavanozodaidzwa kuti vapemberere kubudirira kwavo pamwe nekutora mikombe yavo, zvitupa zvemubairo uye mabhuku egore.
Madhizaini ekuhwina mibairo anozoratidzwazve mushoo yedhizaini yepasi rose muItaly. Vanokodzera vahwina veA' Dhizaini Mubairo vanopihwa iyo inoshuvira A' Dhizaini Mubairo.
Mubairo weA'Dhizaini unosanganisira nhevedzano yehukama hweveruzhinji, kushambadza uye masevhisi ekupa marezenisi kubatsira kugadzira kukoshesa kwepasirese uye kuziva kune madhizaini anohwina mubairo.
Mubairo weA'Dhizaini unosanganisira kupihwa rezinesi kweA' Dhizaini Mubairo Winner Logo kune vanokodzera vahwina kuti vavabatsire kusiyanisa zvigadzirwa zvavo zvakanaka zvekugadzira, mapurojekiti nemasevhisi kubva kune zvimwe zvigadzirwa, mapurojekiti nemasevhisi pamusika.
Mubairo weA'Dhizaini unosanganisira hukama hwepasirese uye nemitauro yakawanda, kushambadza uye masevhisi ekusimudzira kubatsira madhizaini anohwina mibairo kuwana kuratidzwa kwepasirese, kushambadzira uye kuiswa kwenhau.
Iyo A' Dhizaini Mubairo chiitiko chegore negore chekugadzira. Mapindiro einotevera edition yeA' Dhizaini Mubairo uye Makwikwi atovhurwa. Iyo A' Dhizaini Mubairo inogamuchira zvinyorwa kubva kunyika dzese mumaindasitiri ese. Mapato anofarira anogamuchirwa kudoma zvigadziriso zvakanaka zvekutariswa kwemubairo paA'Design Award webhusaiti.
Rondedzero yenhengo dzazvino dzejury, dhizaini yekuongorora maitiro, madhizaini emakwikwi edhizaini, dhizaini mafomu ekupinda emakwikwi uye dhizaini yekupinda mubairo nhungamiro inowanika kubva kuA' Design Award webhusaiti.
Nezve A' Design Awards
Iyo A' Dhizaini Mubairo ine philanthropic chinangwa chekusimudzira nzanga nedhizaini yakanaka. A' Dhizaini Mubairo unovavarira kugadzira ruzivo rwemaitiro akanaka ekugadzira uye misimboti pasi rese, pamwe nekubatidza uye kupa mubairo wekugadzira, mazano ekutanga uye kugadzirwa kwepfungwa muzvikamu zvese zveindasitiri.
Mubairo weA'Dhizaini une chinangwa chekusundira miganhu yesainzi, dhizaini uye tekinoroji mberi nekuvaka kukurudzira kwakasimba kune vanogadzira, vanogadzira uye mabhurendi pasi rese kuti vauye nezvigadzirwa zvepamusoro nemapurojekiti anobatsira nzanga.
A' Dhizaini Mubairo uri kutarisira kusimudzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye mapurojekiti anopa kuwedzera kukosha, kuwedzera kwekushandisa, mashandiro matsva, kuvandudzwa kweaesthetics, kunyatsoshanda zvakanaka, kusimbaradzika kuri nani uye kuita kwepamusoro.
Iyo A' Dhizaini Mubairo ine chinangwa chekuve simba rekutyaira rakasimba mukugadzira ramangwana riri nani nedhizaini yakanaka, ndosaka Mubairo weA'Dhizaini kunyanya uine huwandu hukuru hwemasevhisi ekusimudzira akapihwa madhizaini akanaka.
Ona vakahwina maA' Design Awards